ထိုင်းအစားအစာချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ကြိုက်တဲ့ကိုကို၊မမတွေအတွက်လာပါပြီ…ဆိုင်သစ်လေးတစ်ဆိုင် 2337 views
ရန်ကုန်မှာအခုနောက်ပိုင်းစားသောက်ဆိုင်တွေတော်တော်များများဖွင့်လာကြတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ အဓိကလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုင်တွေထဲမှာ ထိုင်းအစားစာဆိုင်တွေအပါအဝင်ပါပဲ… ဘာလို့ဆို ထိုင်းဆိုင်တော်တော်များများမှာ စားသုံးသူလူအများအပြားတွေ့ရတယ်။ ဖွင့်တာမကြာသေးပေမယ့် အမြဲလိုလိုလူပြည့်နေတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာမှ ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တဲ့ Khraw Thai ဆိုတဲ့ထိုင်းဆိုင်လေးအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်
Khraw Thai ကဖွင့်တာတော့သိပ်မကြာသေးဖူး။ စမ်းချောင်းမှာနေတဲ့လူတွေတော့သိပြီးလောက်ပြီ။ သူကမြောင်းမြလမ်းနဲ့ကျွန်းတောလမ်းထောင့်မှာရှိတယ်။ အက်မင်ဒီဆိုင်ကိုရောက်ဖြစ်တာဒီတစ်ခေါက်နဲ့ဆို သုံးခါရှိပြီ။ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှပဲရေးဖြစ်တော့တယ်။ သူ့ရဲ့အရသာတွေကလည်းစားရတာအရသာရှိပြီး တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေကလည်း အခြားဆိုင်တွေနဲ့နင်လားငါလားပဲ…..ဈေးသိပ်မကြီးတဲ့ထဲပါတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်… ပုံမှန်ဆိုရင်တော့(၃၀၀၀)၊ (၄၀၀၀)၊ (၅၀၀၀)ပတ်ဝန်းကျင်ပဲ။ အဲ့ဒီထက်ဈေးများတဲ့ဟင်းပွဲလည်းရှိတယ်။ အဲ့ဒါတွေဆိုရင်တော့တစ်ပွဲကို နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်တော့စားရတယ်။
ဆိုင်ကနှစ်ထပ် အောက်ထပ်ကတော့ပိုကျယ်တယ်။ အပေါ်ကတော့ထပ်ခိုး ဆိုတော့သိပ်တော့မကျယ်ဖူး။ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ချင်ရင်တော့အပေါ်ထပ်မှာထိုင်ရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်။ ညနေပိုင်းလေး၊ငါးနာရီ လောက်ဆိုရင်အမြဲလူပြည့်တယ်။ ထမင်းစားချိန်ရောပဲ။ အဲ့တော့ကိုယ်က နေ့လည်ပိုင်းပဲသွားဖြစ်တော့တယ်။ လူရှင်းတော့နဲနဲပိုအေးဆေးသလားလို့….
ဒီဆိုင်မှာလူကြိုက်အများဆုံးအစားအစာကကုန့်ထန်ပါ… အခြားသီးစုံထောင်းတို့၊ ဝက်ဂုတ်သားကင်တို့၊ ဘဲနှုတ်သီးကြော်တို့ အပြင်နောက်ထပ်စားကောင်းတဲ့မီနူးတွေလည်းရှိသေးတယ်။ ကိုယ်တွေစားခဲ့တာတော့ ငါးခူမွှကြော်၊ ပင်လယ်တုန်ယမ်း၊ ပုစွန်တုန်ယမ်းသံပြားပူ၊ ကျောက်ပွင့်ပုစွန်ပေါင်း အဲ့ဒါတွေပါ……
ငါးခူမွှကြော်ဆိုရင် တစ်ပွဲကို (၆၀၀၀)ကျပ်။ သူကငါးခူလေးကိုမွမွလေးဖြစ်အောင်ကြော်ထားပြီး အပေါ်က သရက်သီးသုပ်လေးတင်ထားတာ။ သရက်သီးသုပ်ကချဉ်ချဉ်လေးဆိုတော့ ငါးခူမွှကြော်လေးနဲ့စားရတာ တော်တော်လေးလိုက်ဖက်တယ်။
ပင်လယ်တုန်ယမ်း - သူ့ကိုထိုင်းလိုဆို ဟော်မုန့်ဆိုလားပဲ။ သူ့မှာပင်လယ်စာအစုံပါတယ်။ ပုစွန်၊ ပြည်ကြီးငါး၊ ရေဘဝဲ၊ ဂုံးအဲ့ဒါတွေပါတယ်။ ဂဏန်းလည်းထည့်ပေးတယ်။ ကိုယ်တွေသွားတုန်းကတော့ ဂဏန်းပစ္စည်းပြတ် နေလို့တဲ့…. အခြားပင်လယ်စာတွေပဲပိုထည့်ပေးထားတယ်။ အုန်းနို့ပါပေမယ့်တုန်ယမ်းလေးပါထည့်ချက်ထားလို့ သိပ်လည်းမအီဖူး။ သိပ်လည်းမစပ်ဖူး။ အနေတော်လေးပဲ… သူကတစ်ပွဲ (၁၀၀၀၀)ကျပ်။
ပုစွန်တုန်ယမ်းသံပြားပူ - သူ့ကိုထိုင်းလိုဆိုရင် ကွန်ကထားလော လို့ခေါ်တယ်တဲ့။ သူကတော့ပုစွန်(၇)ကောင် ပါတယ်။ ပြောင်းဖူးလေးလည်းအလယ်မှာပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကိုသံပြားပူလေးထဲထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ ပုံမှန်ထက်ပူပူနွေးနွေးလေးစားရတယ်။ အနံ့ကလည်းမွှေးမွှေးလေးနဲ့။ သူ့ရဲ့အရသာက ကုန့်ထန်နဲ့တော့နည်းနည်းသွားဆင်တယ်။ တုန်ယမ်းလည်းပါတယ်။ အရသာကချို၊ချဉ်၊ငံ၊စပ်လေး။ သူနဲ့တွဲစားရတဲ့ Seafood Sauce လေးကလည်းချဉ်ချဉ်၊စပ်စပ်လေးနဲ့ တော်တော်လေးစားကောင်းတယ်။ သူကတစ်ပွဲ (၉၀၀၀)ကျပ်။ (ကုန့်ထန်ကသုံး၊လေးယောက်လောက်စားရတယ်၊ ဈေးက(၁)သောင်းခွဲလောက်ဆို တော့လူနည်းရင်တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်လောက်ဆိုဒါလေးစား၊ ဈေးလည်းအတော်ပဲ)
ကျောက်ပွင့်ပုစွန်ပေါင်း - သူ့ကိုကကွန်ပက်ကာလန်တဲ့။ သူကပုစွန်ကိုပေါင်းထားတာ။ ပုစွန်ရဲ့အသားတွေကို အများကြီးစားချင်ရင်တော့ ဒီဟင်းပွဲလေးကိုစားပါ။ သူ့ရဲ့အရသာကနွေးနွေးလေး… အဲ့လိုလေးပြောလိုက်လို့များထူးဆန်းသွားလား။ အမှန်လည်းဘယ်လိုလေးလည်းမသိဖူး။ နွေးနွေးလေး၊ မချို၊မစပ်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေး လေးတဲ့ဘက်သွားတယ်။ သူကတစ်ပွဲကို(၁၅၀၀၀)ကျပ်
အချိုပွဲအနေနဲ့ကိုယ်တွေစားခဲ့တာက Green Tea Ice Cream
ရေခဲအမှုန်၊အချောင်းလေးတွေကိုမှ Green Tea အရသာလေးနဲ့။ သူကအဲ့ဒါကိုဇွန်းနဲ့ခပ်၊ ယူစားလိုက်ရင် ပါးစပ်ထဲမှာအရင်ဆုံးပျော်မသွားပဲ၊ ပေါင်မုန့်ကိုဝါးစားရသလိုသိပ်သည်းသလိုဖြစ်ပြီးမှပျော်ဝင်သွားတာ။ ဘေးမှာ ချောကလက်ခရင်မ်၊ သကြားရေနဲ့ Green Tea ချောကလတ်ချောင်းလေးလည်းထည့်ပေးထားတယ်။ တစ်ပွဲကိုနှစ်ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်။ ဈေးနှုန်းကလေးထောင်ကျပ်။
နောက် Red Lemon Soda - ရှရှလေးကတစ်ခွက်ကို (၂၅၀၀)ကျပ်
Green Tea ချိုချိုမွှေးမွှေးလေးက တစ်ခွက်ကို (၂၀၀၀)ကျပ်။
ဆိုင်ကမနက်(၁၁)နာရီကနေ ည(၁၁)နာရီအထိဖွင့်တယ်။ Reserve ကြိုလုပ်ပြီး မွေးနေ့ပွဲတွေဘာတွေလုပ်ရင်လည်း 10% Discount ပေးမယ့်အပြင် Surprise Gift တွေလည်းပေးပါတယ်တဲ့။ (မှတ်ပုံတင်တော့ပြရပါတယ်တဲ့)… အက်မင်လည်းဒီဆိုင်ကိုလာစားနေကျ၊ ကြိုက်လည်းကြိုက်တော့ Discount Card မပေးဖူးလားဆိုတော့… သူတို့ (၄)ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတော့လာစားတဲ့သူတွေကိုကဒ်(၁၀၀)လောက်ထိ ထုတ်ထားပြီး ဝေပေးဖို့ရှိပါတယ်တဲ့။
လိပ်စာအတိအကျက အမှတ် (၇၀)၊ ကျွန်းတောလမ်းနှင့်မြောင်းမြလမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာပါ။ Reserve လုပ်ချင်ရင် 09-784877616, 09-767016059 တွေကိုဆက်လို့ရတယ်။ စမ်းချောင်း၊ ကျွန်းတောလမ်းအနီးတဝိုက်ဆိုရင် Delivery ပို့ပေးပါတယ်တဲ့။
#MyLann #Online_Food_Guide #Online_Restaurant_Directory #Food_Review_in_Yangon #Foodie_Myanmar #Restaurant_in_Yangon #Thai_Food
#Khraw_Thai #Thai_Restaurant #Sanchaung